Ciidamada dowladda oo baaritaan dad badan lagu qabtay ka sameeyay Muqdisho Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Ciidamada dowladda oo baaritaan dad badan lagu qabtay ka sameeyay Muqdisho In ka badan Kun ruux ayaa waxa ay Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya ku qabteen baaritaano ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho.
Baaritaanadaani maanta ciidamada booliska iyo kuwa Nabad sugida dowladda ay ka sameeyeen degmooyin ay ka mid yihiin Yaaqshid, Dayniile iyo Huriwaa ayaa waxa ay kusoo qabteen ilaa 1,000 ruux kuwaasi oo lagu eedeynayo dambiyo kala duwan.
Taliyaha Hayadda Nabad sugida Khaliif Axmed Erig oo ka mid ah Saraakiisha hogaamineysa howlgalka maanta ayaa waxa uu sheegay in dadka ay qabteen 135 ruux oo ka mid ah ay xabsi dhigeen oo lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin Xarakada Al Shabaab halka dadka kalana oo ay ka mid yihiin rag ku labisnaa dareeska ciidamada oo dhac gaysan jiray ay baaritaano ku sameynayaan.
Taliyaha ayaa sheegay in baaritaanada kadib ay sii deen doonaan cid waliba oo lagu waayo wax dambi ah hase ahaatee waxa uu sheegay in kuwa dambiga lagu helo talaabo laga qaaday oo sharciga la horgeenayo.
Degmooyinkaani baaritaanada laga sameeyay ayaa mudooyinkii dambe waxaa ka jiray falal amni daro oo dilal ay ka mid yihiin.